Indlela yokusebenzisa iMood Indicative in Spanish
Imba Yokwenyaniso Sebenzisa iMood Indicative
Njengokuba kukho amaxesha esiwasebenzisa ngesiNgesi nangesiSpeyin, njengesiko kunye nexesha elidlulileyo, ngesiSpanish kuneemvakalelo ezintathu ezisetyenzisiweyo kwaye zibonise indlela isivakalisi esakhiwa ngayo. Isimo esiqhelekileyo kwisiSpanish sisimo sengqondo, esetyenziswa kwiintetho eziqhelekileyo xa usenza iingxelo.
NgeSpanish nangesiNgesi, le miqondo emithathu yile: ukubonisa, ukuzithoba nokuyimfuneko.
Imvakalelo yesenzi yipropati ehambelana nendlela umntu usebenzisa isenzi evakalelwa ngayo ngokoqobo okanye ubunzima bakhe; Ukwahlula kwenziwa ngokuphindaphindiweyo ngesiSpanish kunokuba sisiNgesi. NgesiSpeyin, umqondiso ubizwa ngokuba ngu-el indicativo .
Okungakumbi Ngomxholo wokubonisa
Isimo sokubonisa sisetyenziselwa ukuthetha ngezenzo, iziganeko okanye amaNgqina anenyaniso. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukwenza ingxelo engqiniswanga okanye ukuchaza iimpawu ezicacileyo zomntu okanye imeko.
Kwisivakalisi esifana nesithi "Ndiyayibona inja," eguqulela ukuba, Veo el perro , i- vero veo inomxholo wokubonisa .
Eminye imizekelo yeempawu zokubonisa ziquka, iré casa, oku kuthetha ukuba, " Ndiya ekhaya" okanye, i- Compramos dos manzanas, eguqulela ukuba, "Sathenga ii-apula ezimbini." Ezi zombini izitatimende zinyaniso. Izenzi kwizivakalisi zidibene, okanye ziguqulelwe zibe ziifom, ezibonisa isimo sengqondo.
Ukwahlukana Phakathi koMoya oQinisekisiweyo kunye noMboniso
Isimo sengqondo esichaphazelekayo siyahluke- la nomoya wokuzimela , odla ukusetyenziswa xa wenza ingxelo echaseneyo okanye echasene neyoqobo.
Iimoya yokuzimela isetyenziselwa ukuthetha ngeminqweno, ukungathandabuzeki, iimfuno, iziganeko, kunye namathuba, kwaye kukho ezininzi iziganeko zokusetyenziswa kwazo ngesiSpeyin. Ngokomzekelo, "Ukuba ndimncinci, ndiza kuba ngumdlali webhola lebhola," kuguqulela ukuba, Ukuba i-fuera joven, i-sería futbolista. Isenzi esithi "fuera" isebenzisa ifom yokuzimela phantsi kwesenzi, ukuba, ukuba.
Isimo sokuzithoba singasetyenziswa ngokuqhelekileyo ngesiNgesi. Ngokomzekelo ongaqhelekanga wokuzimela phantsi kwesiNgesi, ibinzana elithi "ukuba ndiyindoda ecebileyo" ibhekisela kumbambano ochasene nento. Qaphela, isenzi "sasingavumelani" nesihloko okanye into, kodwa apha, isetyenziswe ngokuchanekileyo kwisivakalisi ukususela kule meko isetyenziswe kwisimo sengqondo sokuzimela. Ulwimi lwesiSpanish lubonakala lungenayo ingxaki usebenzisa isenzi kwisimo sokuthobela xa isivakalisi esifanelekileyo sesiNgesi kwiimeko ezininzi ziza kusebenzisa indlela yokubonisa.
Ukusetyenziswa kweMood Imperative
NgesiNgesi, isimo sengqondo sisetyenziswe phantse lonke ixesha ngaphandle kokunika imiyalelo ngqo. Emva koko, isimo sengqondo esifanelekileyo siza kudlala.
NgesiSpeyin, imvakalelo enyanzelisayo isetyenziselwa kakhulu inkulumo engacwangciswanga kwaye yenye yeefom zezenzi ezingaqhelekanga ngeSpanish. Ngenxa yokuba ngamanye amaxesha umyalelo ochanekileyo unokuzwakala ungenangqondo okanye ungenzi lutho, ifom efunekayo inokuthi igwenywe ngokubhekiselele kwezinye izakhiwo ezenziwayo.
Umzekelo wesimo esifanelekileyo siya kuba, "Yidla." Njengomama oqondisa umntwana wakhe ukuba adle. NgesiNgesi, igama linokuma yedwa njengesigwebo xa sisetyenziswe ngale ndlela. Isenzi, "u-comer," oku kuthetha ukuba "ukutya." NgesiSpanish, esi sigwebo siya kuthiwa, Yiza, okanye, Woza tú.
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: 'Amare'
Ukwenza Ikhandlela Elikhanyayo Ikhandle
Ukulahlekelwa kwe-Space Shuttle Columbia: ngoFebruwari 1, 2002
IMfazwe yaseNglo-Zulu: Imfazwe yaseRourke's Drift